Ogaden News Agency (ONA) – Belguim oo Joojisay Xafladii Sanadka-cusub ee Brussels Arrimo Amni Awgood.
Belguim oo Joojisay Xafladii Sanadka-cusub ee Brussels Arrimo Amni Awgood.
Posted by Daljir	/ January 1, 2016
Maamulka Caasimada Belguim ee Brussels ayaa sheegay in la joojiyey xafladihii habeenka sanadka cusub (Xalay) ka dhici lahaa fagaarayaasha waaweyn ee magaaladaasi. Arrintan ayaa la xaxidhiidha cabsi laga qabo weeraro argagaxiso oo dalkaasi ka dhaca.
Maalinimadii talaadada ahayd ee lasoo dhaafay ayaa sare loo qaaday heeganka ciidamada dalkaasi si ay uga hortagaan weeraro la sheegay inay qorshaynayaan kooxaha argagaxisada.
Waxaa xalay baaritaano lagu sameeyey guryo ku yaal xaafada Molenbeek ee magaalada Brussels oo ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah, balse baaritaanadaasi ayaan wax natiijo ah kasoo bixin. Ciidamada ayaa la sheegay inay weli baadi goobayaan nin lagu magacaabo Salah Abdisalam oo la sheegay inuu ka qeyb qaatay weeraradii ka dhacay Paris bishii lasoo dhaafay.
Habeenkii Isniinta ayaa baaritaano laga sameeyey nawaaxiga magaalada Luik lagu soo qabtay labo nin oo la sheegay inay qorsheenayeen weeraro ay ka geystaan gudaha Belguim xiliga loo dabaal-degayo sanadka cusub.
Ragga la qabtay ayaa la sheegay inay xubno ka ahaayeen kooxda loo yaqaan (Shariica For Belguim) oo horey dalkaasi looga mamanuucay. Dowlada Belguim ayaa ciidamada militariga keentay caasimada Brussels si ay gacanta u siiyaan ciidamada Booliiska.
Wadamo badan oo xalay looga dabaal-degayo sanadka cusub ayaa la sheegay in sare loo qaaday roondooyinka iyo feejignaanta ciidamada amniga.